Mateki ekuchengetedza kumba uye kukunda mutsetse waNdira | Bezzia
Mateki ekuchengetedza kumba uye kukunda mutsetse waNdira
Tony Torres | | Musha
Iyo yakakurumbira Ndira materu rinoratidzika kukwira uye rakaoma kukunda. Kune ese ekuwedzera mari yemwedzi waZvita, inowedzerwa mutengo unowedzera mumasevhisi ekutanga. Kuwedzera kwemari inodhura zvakanyanya kutarisana uye iyo kana ikasatariswa, inogona kurasa zvachose hupfumi hwepamba mumwedzi inotevera.
Naizvozvo, aya matipi ekuchengetedza kumba achakubatsira iwe kuronga zvirinani mari uye nezvaunogona kukunda mutengo waNdira, kunyangwe uine imwe mari. Nemanomano madiki nekuchinja kwemaitiro izvo zvakare ivo vanokubvumidza iwe kugovera zvirinani mari kureba gore rose. Kuti udzivise kusvika pakutanga kwegore uchitambura nekuwedzera mari yemwedzi waZvita.
1 Tricks kuponesa
1.1 Ongorora mari yako
1.2 Ronga kudya kwevhiki
1.3 Chengetedza pakushandiswa kwesimba
1.4 Ngwarira kutengesa
Kuchengetedza kunodiwa, kunotokosha, nekuti kunyangwe uri kuita zvakanaka sei mune zvehupfumi uye nehunyanzvi kutaura, chiitiko chisingatarisirwe chinogona kuitika chero nguva. Kuve nemetiresi diki yakachengetwa rugare rwepfungwa, rugare rwepfungwa uye chengetedzo. Hazvina mhosva kuti unofunga zvishoma sei iwe unogona kuchengetedza, nokuti payrolls kazhinji mapfupi chaizvo kwenguva yakareba sei mwedzi. Mutsika dzevatengi ndiko kwaunogona kuchengetedza diki (kana hombe) mari iyo pakupedzisira inozova chinhu chakakosha.
Ongorora mari yako
Nguva zhinji mari inobuda mukushandisa zvisina basa zvatisingafungire. Kuti udzivise izvi, zvakakosha zvikuru kuziva zvakajeka ndedzipi mari dzinodiwa uye dzisiri, nokuti nenzira iyoyo tinogona kudzivisa kurasikirwa nemari mwedzi woga woga. Nyora pasi mari yakatarwa, idzo dziri dzebasa uye mubhadharo usingachinji mwedzi woga woga. Tora akaundi uye nyora pasi mari, iyo mari imari inowanzoitika inofanira kuvharwa mwedzi woga woga.
Ikozvino verenga kuti ndezvipi zvinodhura mungoro yekutengera, kana iwe uchibhadhara nekadhi, tora mukana iwoyo kuti uve nechaiwo nhamba. Tora mukana wekuti uri kutarisa kubhengi account kuti uone mari dzese dzakaitwa uye dzanga dzisingaite. Chokwadi zvinokushamisa mari yawashandisa pazvinhu zvausingadeNekuda kwekusava nefungidziro yakanaka.
Ronga kudya kwevhiki
Mamwe maeuro akanaka anopinda mubhasikiti rekutenga mwedzi wega wega, kunyanya kana izvo zvekutenga zvisina kurongwa zvakanaka. Chimwe chinhu chine musoro kubvira kana zvisiri unoronga kudya yevhiki, zvakaoma kutenga zvinobudirira. Hazvisi zvekuchengetedza chikafu, kana kuderedza kunaka kwekudya kwemhuri. Ndezve ronga menyu, tarisa pantries uye ita runyoro yekutenga kwakanaka uye kwakakosha. Nenzira iyi iwe zvakare unodzivirira kutenga zvidiki mukati mevhiki uko maeuro mazhinji anoenda kuzvinhu zvisina basa.
Chengetedza pakushandiswa kwesimba
Simba riri pamutengo wakakura, zuva rega rega rinoshanduka uye zuva nezuva rinokwira. Nechikonzero ichi, zvakakosha kwazvo kuziva maawa ekushandiswa kukuru kwesimba kuitira kuti ndikwanise kuchengetedza mari yemagetsi. Izvo zviri nyore nekuti zuva rega rega rinoburitswa muBOE, iwe unongofanirwa kubvunza webhusaiti ye Tsvuku Eléctrica de España. Deredza mamwe mashandisirwo esimba panguva dzepamusoro, uye unogona kuderedza bhiri rako remagetsi.
Mushure mehoridhe kutengesa kwechando kunosvika uye zvinoita sekunge zvinosungirwa uye munhu wese anofanirwa kushandisa mari yavo yepakati kuti aite maererano nehuwandu hwepamutemo. Chinhu icho pasina mubvunzo chinowedzera mari isingakodzeri iyo inowedzera kuomesa kutsetseka kwaNdira. Tenga zvinhu zvaunoda chete. Izvo zvinotengeswa zvakanaka kwazvo kuchengetedza pane zvakakosha. Kana pasina, dzivisa kuedzwa uye unogona kupedza mwedzi wekutanga wegore nemari mubhangi.
Mari chinhu chinodiwa uye chinoshomeka kune ruzhinji rwevanhu. Naizvozvo, zvakakosha kuti udzidze nzira yekuibata nemazvo kuti igokwanisa kuita basa rayo pasina kuita dambudziko. Nemanomano aya, unogona dzidza kushandisa mari shoma uye kuwedzera mari yako yawakachengeta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Mateki ekuchengetedza kumba uye kukunda mutsetse waNdira
Aya ndiwo akahwina-mubairo akateedzana pa2022 Golden Globes
5 chikafu chisingafanirwe kubikwa mu microwave